China Model No: Chinese rụpụta Q91Y Series Hydraulic scrap metal heavy eru shear machine factory na ndị na-ebu ya | Jikọọ Top
Model No: Chinese rụpụta Q91Y Series Hydraulic scrap metal oké ọrụ shiee igwe
Q91Y usoro hydraulic Nrụgide ọrụ ihe mkpuchi igwe, ọ nwere ike ịkwa osisi dị iche iche na profaịlụ, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ígwè a kpokọtara ọnụ, banye n'ogige dị ogologo, mpempe nchara nchara nke etinyere n'ime mgbochi, ụgbọ ala na-ekpofu extruded n'ime ụgbọ ala pịa . Na mgbakwunye na ọrụ ịkwa ajị.
Ebe Mmalite JIANGYIN, CHINA
.Dị Usoro Q91Y
Max tingcha Force 250-1250Tọn
Ogologo agụba 1600-2000mm
Ọrụ Akpaaka njikwa
Anyị Q91Y usoro haịdrọlik ọrụ dị mkpa scrap shiee igwe na ọtụtụ-eji na ụdị nile nke siri ike n'efu scrap ígwè, arọ n'efu, ìhè na mkpa scrap ígwè, scrap ụgbọ ala sheel, ígwè mere nke ìhè metal Ọdịdị nnukwu, profaịlụ, mmepụta na ndụ scrap ígwè, ụdị plastik na-enweghị ígwè (igwe anaghị agba nchara, alloy alloy, ọla kọpa, wdg) mkpakọ nkwakọ na ịkwa ajị anụ iji zute nkọwa dị mkpa nke ụgwọ ahụ, Q91Y usoro hydraulic dị arọ na-arụ ọrụ igwe shear bụ ezigbo akụrụngwa maka igwe igwe, nonferrous metal gbazee ụlọ ọrụ, foundry ụlọ ọrụ na akụrụngwa emepụta.
Q91Y haịdrọlik arọ n'efu akpacha ajị igwe nwekwara nwere extrusion ọrụ, nke nwere ike extrude a ọnụ ọgụgụ nke oge ufodu obere ihichapụ ígwè na ihe onwunwe igbe maka akpacha ajị, mgbe extrusion na akpacha ajị nke gbajiri scrap ígwè, n'elu ajari oyi akwa na ndị ọzọ na-emerụ bekee nwere ike ịbụ na-ekpachapụ anya, na-eme ka ịdị ọcha nke nchara nchara dịkwuo mma. Enwere ike iji ya kpụkọta nnukwu mkpofu dị iche iche. Q91Y usoro hydraulic dị arọ ọrụ scrap shear igwe nwere ike dochie ire ọkụ ọkụ. Ọ dị mma ma rụọ ọrụ nke ọma iji igwe na-ejide igwe ma ọ bụ ụgbọala forklift.
Q91Y usoro hydraulic Nrụgide ọrụ nchacha igwe na-agbazi ígwè efere jikọtara usoro mgbatị, igwe nwere nnukwu nkwụsi ike, akụkụ ndị na-ekpo ọkụ site na ọgwụgwọ ịka nká na-eme agadi, wepụ nrụgide ịgbado ọkụ, nkenke igwe dị mma, kwụsie ike.
● Agụba ejiri ígwè rụọ ihe nwere ogologo ndụ na ndụ.
Arance A na-edozi mkpochapụ nke agụba, nke na-eme ka arụmọrụ nke ngwa ọrụ na ọrụ ọrụ nke mma ahụ ka mma.
● A na-eji igbe arụ ọrụ nke igbe arụ ọrụ rụọ igbe igbe ahụ, wee rụọ mgbidi mgbidi dị n'ime NM500 nchara efere nke nwere akwa mgbochi na-eyi akwa, nke na-ekwu maka mgbochi mgbochi nke igbe ihe. Ngagharị nke isi ịpị nke igbe ihe a na-ebugharị site na sistemụ hydraulic nọọrọ onwe ya, site na moto hydraulic na yinye. The size nke pushing ihe na-akpaghị aka na-achịkwa were were, na o nwere àgwà nke elu na a pụrụ ịdabere na mgbochi bufee nchedo.
● Hydraulic sistemụ nwere ikike ikike ọgụgụ isi na nnwere onwe onwe ya. Isi cylinder shiee na-anabata usoro dị iche iche iji nye egwuregwu zuru oke na ọrụ nke usoro ume ike. Usoro hydraulic niile dị nkenke na nhazi piping bụ ihe ezi uche dị na ya, nke na-ebelata ojiji nke ọkpọkọ akwara na ikpere, si otú ahụ na-ebelata ihe ọkụkụ nke sistemụ hydraulic ma na-ahụkwa nke ọma na ọrụ kwesịrị ekwesị nke hydraulic.
A-design Ihe eji emepụta mmanụ, ụda ezi uche dị na ya, usoro siri ike, nkwụghachi mmanụ na ọdụ ụgbọ mmiri na-ekewapụ site na nkewa, belata mmetụta nke mmanụ mmanụ.
●Q91Y usoro hydraulic dị arọ ọrụ scrap metal shiee igwe na-eji mkpakọ na mkpakọ nke akụkụ abụọ nke mpempe akwụkwọ mkpokọta na ụzọ nri nkewa, imepụta igbe igbe sara mbara, yabụ, itinye n'ọrụ akụrụngwa dị mma, nnukwu njupụta mgbe ịkwa osisi.
A-area Mpaghara mmeghe nke igbe ihe ahụ buru ibu, dabara adaba maka ihe ndị na-arụ ọrụ, mkpofu dị arọ, mpempe ọkụ na nke dị nchara, shea ụgbọala, nnukwu usoro nchara ọkụ, ọkpọkọ ígwè, efere ígwè, ọwa igwe, M nchara, ogwe igwe na profaịlụ profaịlụ ndị ọzọ, dị mfe n'ime igbe ihe ahụ, na-ebuli njirisi ojiji nke akụrụngwa.
● PLC akpaka akara ihuenyo mmetụ panel akpaka integrated ike akara, na multi-n'akuku dum-usoro nlekota oru usoro, adaba maka ọrụ ịchịkwa na dum-usoro nsuso akụrụngwa ojiji. Ọrụ nkwụsi ike na nke a pụrụ ịdabere na ya, ngwaọrụ ikuku ikuku nke nhọrọ, otu onye na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-akwado ngwa ọrụ.
Q91Y usoro hydraulic dị arọ na-arụ ọrụ igwe na-arụ ọrụ igwe na-eji njikwa valve arụ ọrụ a pụrụ ịdabere na ya, usoro ntanetị na usoro jụrụ oyi, nwere ike hụ na usoro ahụ na-arụ ọrụ nke ọma. Ngwa zuru ezu nke ike na-agbanwe agbanwe mgbe niile na teknụzụ dị iche iche dị iche iche nwere ike ịchekwa ihe dịka 30% ka ị na-ahụ maka mmepụta ya, na ike oriri kwa ton nke nchara nchara nhazi dị ala karịa ihe ụlọ ọrụ chọrọ.
Max tingcha Force (Ton)
Nha ụlọ (mm)
Agụba Ogologo (mm)
Akpacha ajị Oge aring oge / min）
Anyị Q91Y usoro hydraulic dị arọ ọrụ scrap shear machin na-enye omenala ndị a ma ama na-arụ ọrụ igwe, anyị na ọtụtụ ndị a ma ama na-azụ ahịa na-arụkọ ọrụ, dị ka SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI na na ihe karịrị afọ 10.
Obere ihe atụ Q91Y hydraulic dị arọ na-arụ ọrụ igwe na-arụ ọrụ igwe nwere ike ichebe nke ọma n'otu akpa 40 HQ. Ọ bụrụ na ụgbọ mmiri n'ụgbọ mmiri, anyị ga-ekpuchi poncho na Load oche iji kpuchido Q91Y haịdrọlik ọrụ dị arọ scrap metal shiee igwe.
Lelee Q91Y usoro Hydraulic dị arọ ọrụ ihe eji arụ ọrụ igwe maka ịchacha ọla na ọrụ!
Nke gara aga: Model No: Chinese rụpụta Manual Control Q43 Series Hydraulic Scrap Metal Alligator Shear Machine
Osote: Model No: Chinese rụpụta Automatic Control Y83 Series Hydraulic Metal Mgbawa Briquetting Press Machine maka Metal imegharị ihe maka iji
Mpempe akwụkwọ Metal Baler, Metal Powder Briquette Machine, Kwụ Baler Aluminium Scrap Press Machine, Agụba Shear Maka Mobile Digger, Hydraulic Baler / Aluminium Nwere Ike Press Machine, Ọla kọpa Scrap Baler,